के कारणले भएको थियो काठमाडौंकै कलेजमा ग्याङ फा’इट ? कारण सुन्दा प्रिन्सिपल छक्क ! – Sunaulo Nepal TV
काठमाडौं – उमेर आनुसार केटाहरुमा जाेस् हुनु सामान्य कुरा हो। तर अहिले आफ्नै उमेरका केटाहरु जम्मा भएर पुरै हल्ला गर्दै र अरुलाई म खतरा हुँ भन्न यति पनि पछाडी पर्दैनन्।
विशेष गरेर त अहिलेका कलेज पढ्ने केटाहरुमा यस्तो जोस् देखिने गरेको छ। अहिले सामाजिक सञ्जालमा एउटा ग्यां’ग फा’इट निकै भाइरल भएको छ। आखिर किन त्यो ग्यां’ग फा’इ’ट भयो भन्ने कुरा पनि निकै चासोको बिषय बन्न पुगेको छ।
यसरी भएको रहेछ ग्या’ङ फा’इट – भिडियोमा एउटा केटा सेतो हुक कालो पाइन्ट र सेतो नै कपाल भएको केटा कलेजको वालबाट उफ्रेर भित्र छिरेको कारण यो निक्कै भारल बन्न पुगेको हो।
एउटै कलेजमा पढेपछि अलि अलि सामान्य कुरामा विवाद हुनु सामान्य कुरा हो। तर यहाँ भने एक पक्षका साथिहरु मिलेर अर्को पक्षको साथीलाई शुरुमा कु’टेप’छि त्यस कु’टाइ खा’ने केटाले आफ्ना दाइ र साथी बोलाएपछि यो सब हुन पुगेको रहेछ।
कलेजले बाहिरका मानिसलाई भित्र छिर्न नदिए पछि त्यो एक जना मानिस कलेजको वालबाट भित्र छिरेको भिडियोमा देखिन्छ। त्यहाँ धेरै बिद्यार्थी हुँदा हुदै पनि त्यो केटाको सहास भने सबैले प्रसंसा त गरेका छन्।
भित्र छिरेको केहि समयपछि त्यस केटालाई समातेर बाहिर ल्याएको देखिन्छ। साथि साथि बीच झगडा हुँदैमा त्यसरी ग्या’ङ्ग फा’इट पनि गर्नु नहुने र कलेजले नै त्यसको समाधान कलेज भित्रै समाधान गर्नु पर्ने भन्ने पनि सामाजिक संजालमा कमेन्ट हरु भेटिन्छन।
तर जुन ब्यक्ति भित्र छिरेका थिए उनलाई अहिले पुलिसले नियन्त्रण गरिसकेको र एक महिना सम्मको जेल सजाय दिएको खबार आए पनि पुष्टि हुन बाँकी नै रहेको छ।
यसैबीच, उक्त कलेजकाे सञ्चालक र प्रिन्सिपलले ग्या’ङ फा’इ’टकाे सन्दर्भमा विद्यार्थीसँग साेधपुछ गरेका छन् । युवतीकाे विषय हाे कि हाेइन भन्ने विषयमा पनि प्रिन्सिपलले ती विद्यार्थीसँग साेधपुछ गरेका छन् ।
Previous पोखरामा महिलाको शव फेला, दुर्गन्ध फैलिएपछि बल्ल खूल्यो कोठाभित्रको रहस्य
Next यस्तो अबस्थामा पक्राउ परे चर्चित अभिनेता शाहरुख खानका छोरा आर्यन